चरम दबाबमा ओली, सचिवका लागि मात्रै २५ जनाको दाबेदारी ! « Name of Truth News : News Portal in Nepal
चरम दबाबमा ओली, सचिवका लागि मात्रै २५ जनाको दाबेदारी !
प्रकाशित मिति : २०७८, मंसिर, ४, शनिबार २०:००
काठमाडौं । यहीं १० गतेदेखि हुने एमालेको १० औं महाधिवेशनका लागि नेकपा एमालेका २५ नेताहरू आकांक्षी देखिएअका छन् । अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल निर्विकल्प जस्तै भएका बेला महासचिव, उपमहासचिव र सचिवमा आकांक्षा राख्नेहरुले नेतासँग लबिङसँगै ‘उम्मेदवारी घोषणा’ गरिरहेका छन् । उपाध्यक्ष र महासचिवका आकांक्षीले मुख नखोले पनि आफूनिकटका कार्यकर्तालाई प्रचार गर्न भनेका छन् र आन्तरिक रुपमा लबिङ तीव्र पारेका छन् ।
चार उपाध्यक्षका लागि सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा बादल, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, युवराज ज्ञवालीलगायतको नाम चर्चामा छ । महासचिवका लागि विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेले प्रचार थालेका छन् । त्यस्तै, एक उपमहासचिवमा अहिलेकै उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र सचिव प्रदीप ज्ञवालीको नाम चर्चामा छ ।
उपाध्यक्ष, महासचिव र उपहासचिवमा भागबण्डा मिलाउँदा यताउता हुनसक्ने सम्भावना छ। माओवादीबाट आएका र १० बुँदे सम्झौता गरेर एमालेमै फर्किएकालाई उचित व्यवस्थापन गर्नै पर्ने दबाबबीच नेतृत्वले सकेसम्म सर्वसम्मत बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । पदाधिकारीमध्ये सचिवमा ज्यादा आकांक्षी देखिएका छन् । सात सचिवका लागि २५ जनाभन्दा बढीले आकांक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
एमालेमा नवौं महाधिवेशनबाट सचिव भएका योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य, त्यस्तै उपमहासचिव नभए प्रदीप ज्ञवालीले पनि सचिवमै चित्त बुझाउनुपर्ने छ । माओवादीबाट आएका टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट पनि सचिवका दाबेदार हुन् । अहिलेका एमाले पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ, केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्कीले पनि सचिव हुने आकांक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै गण्डकीका नेताद्वय किरण गुरुङ र खगराज अधिकारी पनि सचिवका आकांक्षी हुन् । कर्णालीका यामलाल कँडेल र सुदूरपश्चिमका कर्ण थापाले पनि सचिवका लागि लबिङ गरिरहेका छन् ।
प्रदेश २ का एमाले नेताद्वय प्रभु साह र रघुवीर महासेठ, भानुभक्त ढकाल, अरुण नेपाल, आनन्द पोखरेल, पार्वत गुरुङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, लालबाबु पण्डित, शेरधन राई र गुरु बराल पनि सचिव हुन चाहन्छन् । खिमलाल भट्टराई, राधा ज्ञवाली, पद्मा अर्याल, गोकुल बास्कोटा, विष्णु रिमाल, विन्दा पाण्डे, राजेन्द्र गौतमलगायतले सचिव हुनका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गरिरहेका छन् ।